သံလွင်: နိုင်ငံခြားသား အယောက် ၄၀ ပါ အဲကမ္ဘောဇလေယာဉ် စက်ချို့ယွင်း၍ အရေးပေါ်ပြန်ဆင်း
နိုင်ငံခြားသား အယောက် ၄၀ ပါ အဲကမ္ဘောဇလေယာဉ် စက်ချို့ယွင်း၍ အရေးပေါ်ပြန်ဆင်း
ပြည်တွင်း လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် အဲကမ္ဘောဇ လေကြောင်းလိုင်းမှ ART 72 အမျိုးအစား လေ ယာဉ်သည် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည် ၄၀ ဦး အပါအဝင် ခရီးသည် ၆၅ ဦးကို တင်ဆောင်လျက် ရန်ကုန်-ဟဲဟိုး-မန္တလေး-ဟဲဟိုး-ရန်ကုန်ခရီးစဉ် ပြေးဆွဲရန် ၂၈ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ပျံသန်းထွက်ခွာခဲ့ပြီး မကြာမီစက်ချို့ယွင်းသဖြင့် မြေပြင်သို့ ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်း အကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်း၍ ပြန်လည် ဆင်းသက်ချိန်တွင် လေယာဉ်ဘီး အပူလွန်ကဲပြီး မီးခိုးများ ထွက်ခဲ့သော်လည်း ခရီးသည်များကို အချိန်မီ ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“လေယာဉ်က Heat တက်ပြီး မီးခိုးထွက်တယ်။ ခုတော့ လေယာဉ်ဘီး အားလုံး လဲပြီးပြီ။ စက်ပိုင်းစနစ်ကို စစ်ဆေးနေတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြေပြင်သို့ ဆင်းသက်ပြီး တစ်နာရီ အကြာတွင် အဆိုပါ လေကြောင်းလိုင်းမှ လေယာဉ်တစ်စင်းဖြင့် ယင်းခရီးစဉ်ကို အစားထိုး ပြေးဆွဲခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လိုအပ်သည့်အတွက် ပြန်ဆင်းသည့်အခါ ဘရိတ်အသုံးများပြီး ဘရိတ်ပေါက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် သက်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်းမှ စက်ပိုင်းစနစ် ချို့ယွင်းမှုကို ပြန်လည် စစ်ဆေးနေကြောင်း လေကြောင်း ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့် အရာထမ်းတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“ခရီးသည်တွေ ထိခိုက်မှုမရှိဘူး။ သူတို့ လေယာဉ်နဲ့ပဲ အဲဒီခရီးစဉ်ကို အစားထိုးပြေးတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြန်မာ့လေကြောင်း MAI၏ ညီနောင် လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော အဲကမ္ဘောဇ လေကြောင်း လိုင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် ATR 72-600 အမျိုးအစား လေယာဉ် နှစ်စင်း၊ ATR 72-500 အမျိုးအစား လေယာဉ်လေးစင်း စုစုပေါင်း လေယာဉ်ခြောက်
စင်းဖြင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ပြည်တွင်း မြို့ ၁၈ မြို့သို့ ပျံသန်း ပြေးဆွဲလျက် ရှိသည်။
at 1/29/2014 02:19:00 PM
▼ 01/26 - 02/02 (126)
လာမည့် ခြောက်လနှင့်ရှစ်လကြားတွင် ပြည်ပအော်ပရေတာ မျ...
အော်ရီဒူးက ဇူလိုင်၊ တယ်လီနောက စက်တင်ဘာ ဆက်သွယ်ရေး ...
နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း...
RCSS/SSAနဲ့ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ သီးခြာ...
မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေ ပြောင်းရွှေ့အခြေချခွင့် ကန် လျှော...
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ဧရာဝတီလင်းပိုင် သုတေသန ခရီးစဉ်တွင...
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ အတုဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်...
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး စစ်တပ် အရေးကြီးတဲ့ ကဏ္ဍမ...
ရန်ကုန်မြို့၏ တရုတ်နှစ်သစ်ကူးပွဲ၌ ရိုးရာအကများ၊ နဂ...
တယ်လီနော်နှင့် အူရီဒူးကုမ္ပဏီများ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးနည်းဥပေ...
မောင်တောမြို့နယ် ဒုချီးရားတန်းကျေးရွာမှ ရွာသား ၂၅၀...
အခန်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် ဗိုလ်ဗထူး တန်ဖိုးမှ...
ရခိုင်-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် နယ်ခြားစောင့်တပ်ထား...
မလေးရှားတွင် အကျဉ်းကျ မြန်မာများ တစ်လတစ်ကြိမ် နေရပ...
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အကျဉ်းကျခံခဲ့ရသူ ဦးကျော်ဝဏ္ဏနှ...
ယူကရိန်းအရေး နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်များ ဝင်ရောက် မ...
ဟောင်ကောင်တွင် H7N9 ကြက်တုပ်ကွေးပိုးတွေ့၊ ကြက် ၂၀၀...
တောင်ကိုရီးယားနှင့် စစ်ရေး ပူးပေါင်း လေ့ကျင့်မှု အေ...
ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က အီရန်ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမည့် ဥပဒေ...
နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမည်လို့ ဒေါ်အော...
မိုးထိမိုးမိလုပ်သားတွေ နေရာမဖယ်ပါက အရေးယူမယ်လို့ အ...
မြန်မာအိမ်ဖော်တွေကို ဟောင်ကောင်ပို့ဖို့ ဆက်လက်ဆောင...
စာနယ်ဇင်းသမား လူငယ်တွေကို စမတ်ကျစေချင်တဲ့ တင်မိုးလ...
တိုက်ပွဲ မဖြစ်၍ အပစ်ရပ်ရေးဆွေးနွေးပွဲ “ဝ” တပ်ဖွဲ့ ...
ခြစားမှုရှိလျှင် ကမ္ဘာ့ဘဏ် အကူအညီ ပြန်ရုပ်သိမ်းမည်
ရခိုင် ရေနံပိုက်လိုင်း လုပ်ငန်းခွင် တရုတ်နှင့်မြန်...
ဗြိတိသျှ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကချင်စစ်ပြန် ၁...
ရခိုင်အရေး သတင်းထုတ်ပြန်ရန် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ...
တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အပစ်ရပ်ရေး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်...
RCSS နှင့် ၀န်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေ...
ဂျာမနီသမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံလာမည်
အမေရိကန် မောင်းသူမဲ့ယာဉ် သမုဒ္ဒရာထဲ ထိုးကျ
ယူကရိန်းကို ပေးမယ့်ငွေ ရုရှား ထိန်းထား
ပုဒ်မ၅၉(စ)မပြင်သင့်ဘူးလို့ တစညပါတီ ပြော
နယ်ဆင်မင်ဒဲလား၏ ဇနီး ပိုင်ဆိုင်ဖူးသော ဖော်ကာလေယာဉ်...
BAIC မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း အင်ဂျင်...
ဇန်န၀ါရီ ၂၄ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်သွယ်မှု စုစုပေ...
ကျူးကျော်အိမ်ရာများ ဖယ်ရှားရာတွင် အင်အားသုံးဖယ်ရှာ...
ပြည်ပဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Ooredoo နှင့် Telenor တို့အာ...
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ လူကုန်ကူးမှု မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး...
မောင်တောမြို့ ဒုချီးရားတန်းအနောက်ရွာတွင် နေရာကွက်၍...
မလေးရှားနိုင်ငံ Camp ကိုးခုရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၄...
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အသိအမှတ်ပြုရေး တိုးမြှင...
ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး အမှုဆောင်သစ်များ ရွေးချယ်ပွဲ ဥက္က...
“အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပိုလုပ်ချင်တယ်”
နိုင်ငံခြားသား အယောက် ၄၀ ပါ အဲကမ္ဘောဇလေယာဉ် စက်ချို...
" နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အကြားသဘေ...
မလေးရှားတွင် အကျဉ်းကျနေသည့် မြန်မာ ၁၄၀ ကျော် ပြည်ေ...
ခုံရုံး ဆုံးဖြတ်မည့်ကိစ္စ လွှတ်တော်ဘက်ကမှန်မည်ဟု ဒေါ်...
Angry Birds ဂိမ်းသည် NSA ၏ အသုံးချခံ ဖြစ်လာဟုဆို
ဂိမ်းဆော့ဖုိ့အတွက် တရုတ်ပြည်မှ ဇနီးမောင်နှံက သားသမ...
အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှသူလျှိုများက မိုဘိုင်းဖုန်းမ...
ဇန်န၀ါရီ ၂၈ ရက်ညပိုင်းက ရွှေဂုံတိုင် Excel Treasure...
သြစတြေးလျက ဘုရင်ခံချုပ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်
သတ်မှတ်ရက်အတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ထိုင်...
လုံခြုံရေးကြောင့် မာလာလာ စာအုပ်ရောင်းပွဲ ဖျက်သိမ်း...
ထိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၀င်ရောက်မြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လ...
မွတ်ဆလင်များသတ်ဖြတ်ခံရမှု ဖော်ပြသော ကုလနှင့်အေပီ ကျ...
တရုတ် ရွှေဂက်စ် ပိုက်လိုင်း လုံခြုံရေး စိုးရိမ်စရာမ...
မလေးရှားစီမံချက် မြန်မာနိုင်ငံသား ရာချီထိန်းသိမ်းခ...
စိတ်ထားဖြူအောင် ထားတာကြာင့် ချစ်တဲ့သူတွေများတယ် ကေ...
လွှတ်တော် ဆုံးဖြတ်ချက်ပြီးမှ အခွန်ဥပဒေများ အသုံးပြု...
Angry Birds ဂိမ်းမှတဆင့် အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိသျှ စပ...
မြန်မာ – ဂျပန်သံတမန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှစ်(၆၀)ပြည့် အထိမ...
ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြန့်ကြာနိုင်
ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှ အမေရိကန် အစိုးရ ထောက်ပံ့ကူညီမည်
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုကြောင့် (...
မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ...
တရားရေးဝန်ထမ်းအချို့၏ အဂတိလိုက်စားမှုများအတွက် ရန်က...
မြန်မာ့လေကြောင်းမှ ခရီးစဉ်ပျံသန်းမှု ရပ်နားခဲ့သည့် ...
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ မတိုင်မီ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အဖွဲ့က မြန်မာနိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ် ရှမ်းတိုင်...
လူကုန်ကူးခံရမည့် ရိုဟင်ဂျာတွေ ထိုင်းရဲကယ်တင်
ရွေးကောက်ပွဲရက်ရွှေ့ဖို့ ထိုင်းအာဏာရပါတီ ငြင်းဆို
ဆီးရီးယား ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ယာယီအစိုးရထူထေ...